Faayinaansii Salaam - Oromia International Bank
Tajaajila faayinaansii Salaam
Waliigaltee baankii fi maamila gidduutti dursee uumamuun namoota ykn dhaabbilee hojii qonnaa irratti bobba’anii oomisha isaanii osoo hin oomishin tajaajila faayinaansii argachuudhaan gara fuula duraatti oomisha oomishu akkaataa waliigaltee jiruun bakka ibsametti qulqullina,hanga fi gosaan gosa faayinaansii itti dhiyeessaniiti.
Amaloota gosa faayinaansii kanaa fi faayidaa isaa
Maamilli baankiidhaa oomisha dura gatii walii galeen kan gurguruu fi maallaqa calla hojii geggeessuuf yeruma sana kan itti argatudha.
Oomishi uwwisa inshuraansii qabaachuu qaba.
Akkaataa waliigaltee dursa raawwatameen maamilli oomishi yeroo ga’u baankiidhaaf bakka ibsametti qulqullina,hanga fi gosaan ni dhiyeessa, kun lammiilee hundaaf ifatti beekamuu qaba.
Baankichi oomisha isaa qaama sadaffaaf dabarsuu ykn gatii gabaatiin gurguruu ni danda’a.
Gosa faayinaansii kanaaf baankiin wabii gaafachuu danda’a.